रामविर मानन्धरको राजीनामा दिए तर बामदेव चुनाव नलड्ने भए ! अब उनको सांसद पद के हुन्छ ? – Pradeshi Online
रामविर मानन्धरको राजीनामा दिए तर बामदेव चुनाव नलड्ने भए ! अब उनको सांसद पद के हुन्छ ?
दसैंले गर्दा सुनसानप्रायः सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा आउने–जाने क्रम फाट्टफुट्ट मात्र थियो। काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र ७ का सांसद रामवीर मानन्धर बिहीबार अपराह्न १ बजेतिर कार्यालय आइपुग्दा माहोल बेग्लै बन्यो। पार्टीका सांसद र कार्यकर्ताको घेरामा परेका उनीमाथि प्रश्नको ओइरो लाग्यो।
नेता वामदेव गौतमका लागि सांसद पदबाट राजीनामा दिएको पत्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत पार्टीमा बुझाएपछि उनी चर्चामा छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सल्लाह नगरी उनले राजीनामापत्र बुझाएपछि शीर्ष नेता नै आश्चर्यमा परेका छन्।
उनको निर्वाचन क्षेत्रका नेता/कार्यकर्ताले यो कदमप्रति जिज्ञासा राख्दै आक्रोश जनाएका छन्। राजीनामा दिने चर्चा सुनेदेखि नै कार्यकर्ताले उनलाई निरन्तर फोन गरिरहेका छन्।
राजीनामापत्र पार्टीमा बुझाए पनि गौतम चुनाव नलड्ने निष्कर्षमा पुगेपछि उनी अप्ठेरोमा देखिएका छन्। उपत्यकामा पार्टीको जनमत खस्किएका बेला पनि उनले एमालेबाट दोस्रो संविधानसभा चुनाव जितेका थिए।
यसपटकको कदमपछि उनको राजनीतिक भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। तर, उनले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। ‘मलाई भोट दिने कसैले पनि विरोध गरेका छैनन्’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मलाई केही गाह्रो पर्दैन।’
Tags: नेपाली राजनीती
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले खुलेर गरे ओली सरकारको प्रशंसा ! के के भने ? ( पढ्नुहोस )